Yan Aung: Language Bar ပျောက်သွားရင်
Language Bar ပျောက်သွားရင်
ဒီတစ်ပါတ်ထဲမှာ ရေရေလည်လည် ကွိုင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့် computer မှာ Language Bar ပျောက်သွားတယ်။ Regional Language settings ထဲဝင်ပြင်မယ်လုပ်တော့လည်း အဲဒီ့ထဲမှာ Language Tab က မမြင်ရဘူး။ Greyed out ဖြစ်နေတယ်။ Wow! တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူးဗျာ။ အကြံကိုအိုက်သွားတာပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း Google လုပ်ကြည့်တယ်။ သူတို့ ပြောတာတွေ လိုက် Try ကြည့်တယ်။ အကြောင်းမထူးဘူးဗျာ။ အချိန် (၃) ရက်လောက်ကုန်သွားတယ်။ Post အသစ်တောင် မရေးနိုင်တော့ဘူး။ Language မှမရှိတော့ တာ။ ဒီနေ့ Friday ဆိုတော့ သေသေချာချာကို ဒီကိစ္စကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်တာ။
နောက်ဆုံးမှာ idea တစ်ခုရသွားတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာ Zawgyi One Unicode ကို Download လုပ်လို့ပဲ။ ခုဘာမှလုပ်မရဘူး။ Unicode ကိုလည်း uninstall လုပ်ပြီးပြီ။ ပြန်ပြီး reinstall လုပ်ကြည့်ရင် ဘာထူးမလဲပေါ့။ လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ Kaboom…..
Language Bar ပြန်ပေါ်လာပါတယ် ခင်ဗျား။
စာဖတ်သူများ ဒီပြဿနာကို တစ်နေ့နေ့ ကြုံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီ post လေးကို သတိရလိုက်ပါ။ ထပ်ပြောလိုက်ပါရစေ။ Google မှာရှာလုိ့မရပါဘူး။
မေတ္တာရှင်/Burma Border Project
What worry does to us? ဘာကိုကျွန်တော်ကြောက်နေတာလဲ ...
Mother ကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်ဗျာ.
၀ူကျိ၊ ကျွန်တော်နဲ့ ကျန်းဆန်းဖုန်း
Me and the paradox!
"Big Dancing Small Town" makes big news in America...
Love the conquerer...
Fluctuation and Confusion